Diyaar ma u tahay in aad muuqaal yar ka hesho horumarka ilmahaaga?
Maadaama ay aad muhiim u yihiin shanta sano ee ugu horreeya nolosha ilmahaaga, waxaan rabnaa in aan kaa caawinno in aad is taageerto. Xogwaraysiga Da'aha iyo Marxaladaha (Ages and Stages Questionnaire) (ASQ) ayaa ah hab aad u fiican oo aad ku hubinayso in ilmahaaga sabiga ah, socodbaradka ah, ama xannaanada ku jira uu caafimaad qabo oo uu diyaar u yahay waxbarashada iyo koritaanka. Weliba waa hab xiise leh oo waqti tayo leh aad kula qaadato ilmahaaga oo aad ku ogaato waxa uu samayn karo! Waxay qaadan doontaa qiyaas ahaan 10 ilaa 15 daqiiqo si loo buuxiyo. Ka dib Hagaha Khayraadka (Resource Navigator) ee barnaamijka Help Me Grow WA ayaa adiga waqti dambe kaala soo xiriiri doona natiijooyinka ilmahaaga.
Waxaan annagu ku talin karnaa waxqabadyo ama maaweelooyin lagu taageero koritaanka ilmahaaga oo lagu sameeyo guriga iyo bulshada dhexdeeda ama, haddii ilmahaagu uu u baahan yahay taageero dheeraad ah, waxaan kula xiriirin karnaa khayraad ama adeegyo iyo takhasusleyaal ku caawin kara.
Waxa aad Filan Karto
Marka aad gujiso badhannada hoose, waxaad tagi doontaa xogwaraysiga ASQ ee internetka. Iyadoo ku xiran da'da ilmahaaga, waxaa lagaa waraysan doonaa kartida uu ilmahaagu u leeyahay in uu sameeyo waxqabadyo gaar ah, sida “Miyuu ilmahaagu isku taagi karaa lug keliya?” Ka dib marka aad jawaabahaaga ku dirto internetka, Isuduweyaashayada Daryeelka ayaa buundayn doona ama buundo ka bixin doona xogwaraysiga ASQ waxayna kula soo xiriiri doonaa hal toddobaad gudihiis si ay natiijooyinka kuu siiyaan. Waxaan annagu ku deeqi doonnaa talooyin ku saabsan ciyaaraha iyo waxqabadyada aad la samayn karto ilmahaaga si aad ugu tababbar siiso xirfadaha soo kobcaya. Waxaan soo diri doonnaa baaris kale 3dii ilaa 6dii biloodba mar, si aad u sii wadi karto in aad wax ka barato oo aad taageerto koritaanka ilmahaaga.
Baaris Iska qaad
Iska qaad Xogwaraysiga Da'aha iyo Marxaladaha (ASQ) ee bilaashka ah si aad u ogaato xirfadaha uu ilmahaagu barto iyo siyaabaha aad u taageeri karto koritaankiisa.
Kaalay un tilmaame
Ma danaynaysaa in aad wax dheeraad ah ka barato habdhaqannada sida dhirifyada iyo wadaagista? Iska qaad xogwaraysiga ASQ ee ku saabsan xirfadaha bulsheed iyo shucuureed.
Bilow baarista bulsheed iyo shucuureed
Kaalay un cuestionario socioemocional
Xogwaraysiga ASQ laguma soo ogaado dib u dhac ama naafonimo, oo looguma talagalin in uu beddelo baaritaanka caafimaadka ee takhtarka ilmahaaga. Hase yeeshee, waxuu muujin karaa haddii loo baahan yahay qiimayn dheeraad ah.
Su'aalo ama walaacyo?
Fadlan booqo Su'aalaha, WalaacyadaCaadiga, ah ama wac Khadka macluumaadka barnaamijka Help Me Grow ee Washington ee ah 1-800-322-2588.
Marxaladaha la gaaro waa muhiim! Abb ama barnaamij telefoonka gacanta oo bilaash ah ayaad si fudud ugula socon kartaa marxaladaha horumarka hore ee uu ilmahaaga gaaro, si aad u hubin karto in uu jidka toosan ku jiro.